Debian na Fedora na-anwa idozi nsogbu nke ịdabere | Site na Linux
Njikọ ederede na-eme ka nsogbu ahụ ka njọ: otu ọbá akwụkwọ nwere ike ịchọ otu ụdị nke ịdabere iji rụọ ọrụ siri ike, nke ọzọ nwere ike ịchọ nke ọzọ.
Ọtụtụ ọrụ chọrọ nsụgharị ọhụrụ nke ọbá akwụkwọ iji rụọ ọrụ, nke na-anaghị ezute mgbe niile nkwụsi ike nke nkesa (a na-eme mmepe na-aga n'ihu na gburugburu ebe obibi nke Node.js site na iji nsụgharị ọhụrụ nke ntọala, yana nkesa chọrọ nkwado ruo ọtụtụ afọ)
Mgbalị iji dozie nsụgharị ngwugwu na nkesa naanị na-eduga na mmụba na nsụgharị oge ochie na nchekwa nke edebeghị maka afọ. Nmeghasị nke mmezi maka otu ngwugwu na-emetụta ọtụtụ nchịkọta ndị ọzọ n'ụzọ na-adịghị mma ma mepụta ọbụna nsogbu ndị ọzọ.
Ọzọkwa, lobe dabere eduga na eziokwu na ọtụtụ ọba akwụkwọ nke Node.js agaghị ekwe omume iwepụ ya na sistemụ ahụnke, n’aka nke ya, na - egbochi gị iwepu mmemme Node.js ndị ọzọ.
Iji lebara nke a anya, ọrụ Fedora kwadoro n'oge na-adịbeghị anya atụmatụ iji kwụsị ndozi ndozi nke ngwugwu dị iche na ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ ejiri na oru Node.js.
O kpebiri, malite na Fedora 34, iji nye naanị nchịkọta ngwugwu maka Node.js nwere onye ntụgharị okwu, isi okwu, isi ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ, ọnụọgụ abụọ, yana ngwa ọrụ nchịkọta ngwugwu (NPM, yarn).
Na ngwa nchekwa Fedora na-eji Node.js, a na-ahapụ ya ka ọ tinye ihe niile dị na ngwugwu, na-enweghị ikewa ma kewaa ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ ejiri na ngwugwu dị iche.
Bedbanye ọbá akwụkwọ ga-ewepụ obere ngwugwu ngwugwu, mee ka mmezi ngwugwu dị mfe (n'oge gara aga, onye na-elekọta oge etinyekwu oge iji nyochaa ma nwalee ọtụtụ narị nchịkọta yana ụlọ akwụkwọ karịa na ngwugwu ahụ na mmemme), chekwaa akụrụngwa site na esemokwu nke ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ ma dozie nsogbu metụtara ijikọ nsụgharị nke ọbá akwụkwọ (ndị na-edezi ihe ga-agụnye ụdị ndị anwalere ma mepụta na ngwugwu).
Ndabere nke mwekota ga-abụ ihe mgbagwoju anya nke usoro nke iweta mmezi gaa n'ọnọdụ ọma n'ọbá akwụkwọ, nke ga-achọ ọrụ achikọtara nke ndị na-elekọta ngwugwu niile gụnyere ọba akwụkwọ na-adịghị ike. Enwere ihe egwu na ngwugwu ga echefu imelite akwukwo ulo akwukwo na adighi mfe.
Ndị mmepe nke Debian na-ekwukwa ka ịgbanwee gaa na ụdị ngwakọ ngwakọ ngwakọ yiri nke a. Na mgbakwunye na Node.js, mkparịta ụka ahụ metụtara okike nke nchịkọta maka ikpo okwu Kubernetes na oru ngo na asụsụ PHP na asụsụ Go, nke enwere ike ịkewa n'ime obere ịdabere. Enweghi mkpebi ọ bụla, mana enwere olile anya na ka oge na-aga, nsogbu a ga-akawanye njọ ma n'oge na-adịghị anya, a ga-amanye oru ahụ ime ihe.
Gsa (Greenbone Security Assistant) web interface maka gvm (Greenbone Vulnerability Management) edepụtara nyocha nyocha dị ka ihe atụ nke nsogbu ndị na-akwado ngwugwu nwere.
Versiondị gsa nke Debian zigara bụ nke na-ekwekọghị na nsụgharị gvm ndị ọhụrụ, mana ọ gaghị ekwe omume imelite gsa na ụdị nke ugbu a n'ihi na ọ nwere mgbanwe dị ukwuu ma jiri npm budata ụlọ akwụkwọ Node.js dị mkpa.
Ọba akwụkwọ achọrọ karịrị akarị ma chọọ ka e mepụta ngwugwu ọhụụ na Debian ka mmadụ chekwaa ha, ebe iwu Debian machibidoro itinye ihe ndị dị na mpụga n'oge usoro iwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Debian na Fedora na-anwa idozi nsogbu ndị ahụ
Mpekere nke ụlọ akwụkwọ na ọba akwụkwọ na ECMAscript enwetabeghị aka.
Juggernaut, Sphinx na Ọnọdụ: Mmasị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa